Obere ihe mpempe akwụkwọ ntanetị bụ ngwaahịa ọhụrụ nwere teknụzụ dị elu na ikike nke aka ya, nke bụ ụdị pụrụ iche na China. Ọ nwere usoro ntụgharị dị iche iche, na-egbu egbu mgbanwe. A na-ejikarị igwe a ihe ubi ma jikọta ihe ọkụkụ dị ala dị ka ọka wit, osikapa, ọka bali, otis, wdg. Ọ dị na ugwu, mkpọda, obere ubi, wdg. Ọzọkwa, ọ bụ uru nke obere olu, kọmpat. Ọdịdị, zuru owuwe ihe ubi, ala ahịhịa ọka, akpaka nkịtị, na-etinye, es ...
Onye na-ewe ihe ubi
Ngwaahịa windrower bụ ụdị pụrụ iche na ebumnuche ebumnuche, kewara ụzọ atọ: onye na-anya onwe ya, traktọ na-adọta ma kwụsịtụrụ. Igwe ahụ dị mma maka owuwe ihe ubi osikapa, ala ịta ahịhịa, ọka wit, ọka, wdg. A ga-egbutu ihe ọkụkụ ma gbasaa na ahịhịa ọka wee ghọọ igwe owuwe ihe ubi nke na-ekpuchi ọdụ ọdụ maka ihicha. A na-atụtụ mkpụrụ ọka a mịrị amị ma na-egbute ya site na ọka na-atụtụ ọka na onye na-atụtụ. Mbelata nke ubi ahụ na-enyeju s ...
Power Machinery-Ije Ije traktọ
Product Ihe RY ụdị ije traktọ bụ ikpu na mbanye sọrọ-nzube ụdị na-eje ije traktọ. Ọ nwere obere na kọmpat usoro, fechaa, pụrụ ịdabere na arụmọrụ, ogologo ọrụ ndụ, mfe ọrụ, na ezi na-agba ọsọ ike. The ngwaahịa na-bụ-eji maka ala akọrọ, paddy ubi, ugwu na ubi mkpụrụ osisi, akwukwo nri plots, wdg ya ike ịkọ, rotary tilling, owuwe ihe ubi, nzọcha mkpụrụ, mmiri, na ndị ọzọ na ubi & iga arụmọrụ nwere ike mụụrụ. Enwere ike ijikọ ya na ...